ကုန်အထုပ်များအတွက် ပူတံဆိပ်ပုံနှိပ်ဖွိုင် | FOILMASTER (THAILAND) CO.,LTD.
FOILMASTER (THAILAND) CO.,LTD.
မီတောလဈဖှိုငျ၊ ပုလဲရောငျဖှိုငျ၊ ဟိုလိုဂရမျဖှိုငျ၊ ထုတျကုနျအတုကာကှယျစရေနျ ဖှိုငျ၊ လှပစသေောအထုပျပုံနှိပျခွငျးစကျမှုလုပျငနျး ဖွဈသညျ။ လိုဂို၊ ကုနျအမညျ၊ အမှတျတံဆိပျတှငျ ပွသခွငျးအတှကျ လှပစရေနျ သတ်တုပါး၏အရောငျဖွငျ့ ပုံနှိပျခွငျးနှငျ့ဆိုငျသောတကျနိုလိုဂြီရှိပါသညျ။
ဖွိုင်မစတာ (ထိုင်းနိုင်ငံ) ကုမ္ပဏီ လီမီတက်
ဖွိုင်မစတာ (ထိုင်းနိုင်ငံ) ကုမ္ပဏီ လီမီတက်သည် အကြံဥာဏ်နှင့်အမြန်ပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ သတ္တုပါးတံဆိပ်ခေါင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် သင့်လျော်ရန် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် အရည်အသွေးမြင့်သတ္တုပါးထိပ်ဖျား၊ တံဆိပ်ခေါင်းများတို့ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုအားလုံးမှ မတူကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် အစွမ်းကုန်အသင့်ရှိပါသည်။ မီတော်လစ်သတ္တုပါး၊ ပုလဲရောင်သတ္တုပါး၊ အမှတ်တံဆိပ်အတုကိုကာကွယ်တားဆီးရန် အခြားပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာတွင် ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက် အလှအပနှင့်တန်ဖိုးကို ထည့်သွင်းရန်ထုပ်ပိုးခြင်းတွင်ပုံနှိပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးလုပ်ငန်း အလုပ်နိုင်ပါ။ ကုဒ်ဒင် (ခြယ်ပစ္စည်း) အပူမှင်ဘောလုံးကိုသတ္တုပါး၊ အပူဖဲကြိုးထုပ်လုပ်မှုနေ့စွဲ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရ့်စွဲ၊ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးထုပ်ပိုးပေါ်ဘားကုဒ်ကို ပုံနှိပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ ခြစ်ခြင်း၊ နုန်းတင်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအရာများကို မခံနိုင်အောင်ကြာရှည်ခံရန် သတ္တုပါး၊ အလှကုန်ထုပ်ပိုးမှုအတွက် အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ လျှပ်စစ်ကိရိယာာတောက်အသောသတ္တုပါးများနှင့် အမျိုးအစားတွင် အသုံးပြုရန် အဝတ်အထည်
ဖွိုင်မစတာ (ထိုင်းနိုင်ငံ) ကုမ္ပဏီ လီမီတက်သည် 25 နှစ်ကျော် ဖွိုင်တံဆိပ်ပုံနှိပ်စက်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးမှ မတူကွဲပြားသောလို အပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် အလွန်အမင်းပြင်ဆင်ထားသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် အဆင်သင့်ရှိသောကျွမ်းကျင်သောဝန်ထမ်း၊ စက်ယန္တယားများဖြင့် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန် အဆင်သင့်ရှိသောအဆောက်အအုံများ၊ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည့်စီးပွားဖက်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က ဖွိုင်တံဆိပ်ပုံနှိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူဖြစ်သည်။
ဖွိုင်တံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းစီးပြွးရေးလုပ်ငန်းအတွက် ဖွိုင်မစတာတွင် ဖွိုင်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်တိုင်း 25 နှစ်ကျော် ဝန်ဆောင်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ဖွိုင်မစတာ (ထိုင်းနိုင်ငံ) ကုမ္ပဏီ လီမီတက်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးမှ မတူကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် အထူးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိနိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းများနှင့် အကောင်းဆုံးသော အရည်အသွေးမြင့်သတ္တုပါးလွှာကို ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးမှ ဝယ်ယူသူများ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် အပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားသည်။ အကြံဥာဏ်ပေးခြင်းနှင့်မြန်ဆန်သောဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏အကျိုးကျေးဇူးကို ရှိပြီး လက်အောက်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် အာရုံစိုက်သည်။ ကုမ္မဏီ၏အရည်အသွေးပေါ်လစီသည် ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်အခိုင်အမာဆိုလျှင် ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုရရှိရန် ကြိုးပမ်းသည်။
FOILMASTER (THAILAND) CO.,LTD. (M)
အမှတျတံဆိပျမြားနှငျ့ စက်ကူမြားတို့အတှကျ အပူပုံနှိပျသတ်တု ကုနျပို့လှာရယူရနျ
အီလကျထရောနဈအစိတျအပိုငျး၊ လြှပျစဈပစ်စညျးအတှကျ ဖှိုငျ ကုနျပို့လှာရယူရနျ
ထုတျလုပျရကျစှဲနှငျ့ သကျကုနျရကျစှဲပုံနှိပျစကျ ကုနျပို့လှာရယူရနျ
555 Soi Sansabai 4, Rama4Road, PraKanong ,Klongtoey, Bangkok.
+66 2661 3900-11
Copyright © 2021 AECGATEWAY By Brandex Directory Co., Ltd. All right reserved.